Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.1 Okwu Mmalite
Wikipedia dị ịtụnanya. Mmekọrịta nke ndị ọrụ afọ ofufo na-emepụta akwụkwọ nkà mmụta dị oke egwu nke dịịrị onye ọ bụla. Isi ihe na-eme ka Wikipedia nweta ihe ịga nke ọma abụghị ihe ọhụrụ; kama nke ahụ, ọ bụ ụdị mmemme ọhụrụ. Oge dijitalị, n'ụzọ dị mma, na-enyere ọtụtụ ụdị mmemme ọhụrụ. Ya mere, anyị kwesịrị ịjụ ugbu a, sị: Nso nsogbu ndị dị na sayensị-nsogbu ndị anyị na-apụghị idozi n'otu n'otu-ka anyị nwere ike izute ugbu a?
Mmekota na-eme nnyocha bụ ihe ọhụrụ, n'ezie. Gịnị bụ ọhụrụ Otú ọ dị, na dijitalụ afọ enyere mmekota na a ukwuu ibu ọzọ iche iche set nke ndị mmadụ: na ọtụtụ ijeri mmadụ gburugburu ụwa na Internet ohere. M na-atụ anya ka ndị a na ọhụrụ uka collaborations ga-ekwenyere ịtụnanya pụta bụghị naanị n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ aka, kamakwa, n'ihi na ha na iche iche nkà na echiche. Olee otú anyị pụrụ itinye onye ọ bụla na njikọ Ịntanetị n'ime anyị research usoro? Gịnị nwere ike ị na-eme na 100 nnyocha na-enyere aka? Ihe dị ka 100,000 ọkà rụkọrọ ọrụ?
Enwere otutu ngosiputa nke ndi mmadu, ndi sayensi sayensi na achikota ha (Quinn and Bederson 2011) iche iche na-adabere na njirimara ha (Quinn and Bederson 2011) . N'isiakwụkwọ a, Otú ọ dị, m ga-ejikọta ọrụ mmekọrịta ọnụ na-adabere n'otú e si eji ha mee nnyocha maka mmadụ. Karịsịa, echere m na ọ ga-enye aka ịmata ọdịiche dị n'etiti ụdị ọrụ atọ: nchịkọta ụmụ mmadụ , oku a na-akpọghe , ma kesaa data (nọmba 5.1).
M ga-akọwa nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a ka o doo anya n'isiakwụkwọ ahụ, mana maka ugbu a ka m kọwaa nke ọ bụla na nkenke. Ihe ndi mmadu ji atumatu ha bu ihe kwesiri ka odi mfe nsogbu-nsogbu di uku dika ima aha nde ihe nde. Ihe ndị a bụ ọrụ ndị na-enyere aka na ndị na-enyere aka nyocha n'oge gara aga. Onyinye anaghị achọ ọrụ ndị metụtara ọrụ, ihe mmepụta ikpeazụ bụkarị onyinye nke onyinye niile. Otu ihe atụ zuru oke nke ọrụ nhazi mmadụ bụ Zoo Zoo, ebe otu puku ndị ọrụ afọ ofufo nyere ndị na-enyocha mbara igwe aka ịkọ nde ụyọkọ kpakpando. N'aka nke ọzọ, ọrụ mmemme a na- emeghe , na-adabara maka nsogbu ebe ị na-achọ akwụkwọ akụkọ na azịza ndị a na-atụghị anya ha nye ajụjụ ndị doro anya. Ihe ndị a bụ ọrụ ndị gara aga nwere ike ịjụ ịjụ ndị ọrụ. Onyinye sitere n'aka ndị nwere ọrụ pụrụ iche na-arụ ọrụ, na mmepụta ikpeazụ bụkarị onyinye kacha mma niile. Otu ihe atụ nke oku na-emeghe bụ Netflix Prize, bụ ebe ọtụtụ puku ndị ọkà mmụta sayensị na ndị omempụ na-arụ ọrụ ịzụlite algorithms ọhụrụ ịkọ amụma fim nke ndị ahịa. N'ikpeazụ, a na- ekesa ọrụ nchịkọta data iji dabaa maka nchịkọta data buru ibu. Ihe ndị a bụ ọrụ ndị na-enyere aka ma ọ bụ ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ n'oge gara aga. Onyinye na-esite n'aka ndị nwere ohere na ebe ndị nchọpụta adịghị, ngwaahịa ikpeazụ bụ nchịkọta nchịkọta dị mfe. Otu ihe omuma atu nke nchịkọta data a kesara bụ eBird, bụ ebe ọtụtụ narị puku ndị ọrụ afọ ofufo na-enye akụkọ gbasara nnụnụ ha na-ahụ.
Ọgụgụ 5.1: Mass mmekota schematic. Isiokwu a haziri gburugburu atọ isi iche nke uka mmekota: mmadụ mgbakọ, na-emeghe oku na-aga, na-ekesa data collection. More n'ozuzu, uka mmekota agwakọta echiche si n'ubi ndị dị otú ahụ dị ka nwa amaala sayensị, crowdsourcing, na mkpokọta ọgụgụ isi.
Mmekọrịta Mass nwere ogologo oge, ọgaranya akụkọ na mpaghara ndị dị ka mbara igwe (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) na ecology (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , ma ọ bụbeghị ihe gbasara nnyocha mmadụ. Otú ọ dị, site n'ịkọwapụta ọrụ ndị na-aga nke ọma site na mpaghara ndị ọzọ na inye ụkpụrụ ole na ole na-ahazi, enwere m olileanya ịkwado gị ihe abụọ. Nke mbụ, a ga- enwe ike ịmekọrịta ọnụ ọgụgụ maka nchọpụta mmadụ. Na, nke abụọ, ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-ejikọta ọnụ ọgụgụ ga-enwe ike idozi nsogbu ndị yiri ka ọ gaghị ekwe omume. Ọ bụ ezie na a na-akwalite mmekọrịta nkwado dịka ụzọ isi zọpụta ego, ọ bụ karịa nke ahụ. Dị ka m ga-egosi, nchịkọta ọnụ ahịa anaghị enye anyị ohere ime nnyocha dị ọnụ ala , ọ na-enye anyị ohere ime nyocha nke ka mma .
N'isiakwụkwọ ndị bu ụzọ, ị hụla ihe a pụrụ ịmụta site na iso ndị mmadụ na ụzọ atọ dị iche iche: ịhụ omume ha (Isi nke 2), ịjụ ha ajụjụ (Isi nke 3) na idebanye aha ha na nyocha (Isi nke 4). N'isi nke a, m ga - egosi gị ihe a pụrụ ịmụta site n'inweta ndị mmadụ dịka ndị na-eme nchọpụta. Maka otu n'ime isi ihe atọ kachasị mma, m ga-akọwa ihe atụ atụ, gosipụta ihe ndị ọzọ dị mkpa na ihe atụ ndị ọzọ, ma mesịa kọwaa otú a ga-esi jiri ụdị mmemme a mee nnyocha maka mmadụ. Isi nke a ga-ejedebe na iwu ise nwere ike inyere gị aka ịmepụta ihe ị ga-eme.